Ukuze ufanelekele ukuba yisakhamuzi ngaphansi kwenketho yezakhiwo, uhulumeni ufuna ukuthi abafakizicelo benze imali ngokuqokwa, bavunyelwe ngokusemthethweni ukuhweba ngezindlu ngenani okungenani lama- US $ 400,000 kanye nokukhokhwa kwemali yokufaka kahulumeni nezimali ezikhokhiswayo.
Ngaphezu kwalokho, abafakizicelo ababili noma ngaphezulu abenze isivumelwano esibophayo sokuthengisa nokuthenga bangafaka isicelo ngokuhlanganyela sokuba yisakhamuzi ngotshalomali inqobo nje uma umfakisicelo ngamunye efaka isandla ekutshaleni okuncane kwe-US $ 400,000 yase-US.
Ubunikazi bendawo obuzuzisayo buvumelekile yinkampani engenzi inzuzo uma inkampani inikeze wonke amasheya ayo agunyaziwe kumfakisicelo, isunguliwe futhi isesimweni esihle ngaphansi kwemithetho ye-Antigua neBarbuda, akuyona into yokukhululwa noma inhlangano engaphesheya kwezilwandle futhi iletha ubufakazi obungenakuphikwa ngobunikazi bayo obuzuzisayo, obuzofakazelwa bufakazi buzoqinisekiswa nguMbhalisi Wezinkampani.
Njengoba inqubo yokufaka isicelo ngaphansi kwalolu khetho ibandakanya ukuthengwa kwezindawo zokuhlala, lokhu kungandisa isikhathi sokusebenza ngokuya ngempahla ekhethiwe. Indawo ethengiswayo ayikwazi ukuthengiswa kuze kube yiminyaka engu-5 ngemuva kokuthenga, ngaphandle kokuthi uthenga enye impahla egunyaziwe ngokusemthethweni e-Antigua naseBarbuda.
Ukufaka isicelo sokuba yisakhamizi ngokutshala imali ngaphansi kwenketho yokutshala izindlu nomhlaba kungahanjiswa kwi-Citizenship by Investment Unit (CIU) lapho isivumelwano esisibopho sokuthenga nokuthengisa sisayiniwe nonjiniyela wephrojekthi evunyelwe, esizokhonjelwa ekunikezelweni kwe isicelo sokuba yisakhamuzi.
Lapho ufaka isicelo sakho uzocelwa ukuthi ukhokhe imali efanele kanye ne-10% yemali ekhishwa nguhulumeni. Lapho uthola incwadi yokuvunywa uzocelwa ukuthi ukhokhe imali esele kahulumeni yokucubungula nazo zonke izamba ngenxa yomqambi ngaphansi kwesivumelwano sokuthengisa nokuthenga ukunika amandla itayitile ukuthi libhaliswe egameni lakho futhi uvumele ukuqaliswa kwangempela okuphakanyisiwe utshalomali lwefa ngokuya ngemihlahlandlela esungulwe yiCitizenship by Investment Unit (CIU).
Uma sesitholile, kuzokhishwa isitifiketi sobhaliso (serejistreshini) yomfakisicelo wokuqala kanye namalungu omndeni wabo okuzodingeka ukuthi angeniswe ehhovisi lepasipoti ngesicelo sabo kanye nanoma yimiphi imibhalo ehambisana nayo.
Umenzeli / ummeli wakho ogunyaziwe uzokweluleka ngezinsuku ezitholakala kunoma iyiphi;
Vakashela i-Antigua neBarbuda ukuqoqa ipasipoti yakho futhi uthathe isifungo noma isiqinisekiso sokuqina